Noho ny hamamoana sa vokatry ny hatsiaka ? : lehilahy iray hita faty tetsy Isotry | NewsMada
Noho ny hamamoana sa vokatry ny hatsiaka ? : lehilahy iray hita faty tetsy Isotry
Par Taratra sur 30/06/2017
Hataraina ny an’ireo olona teny Isotry, omaly vao maraina raha nahita fatin-dehilahy iray manodidina ny 30 taona eo ho eo nivalampatra teo akaikin’ny sarety entin-. Araka ny fanazavan’ireo olona mahafantatra azy ity, mipetraka tsy lavitra ny toerana nahitana ny fatiny izy. Hatreto aloha tsy fantatra marina izay antony nahafaty azy fa araka ny tombantomban’ireo olona mahafantatra azy, mety noho ny fisotroana toaka diso tafahoatra no nitarika ny fahatesany miampy ny hatsiaka mandra-marain’ny andro. Efa nisy nahita izy ny nivalampatra natory teo akaik’ilay saretin-tanana, saingy tsy tafatsangana intsony ka ny fatiny sisa hitan’ny olona nony maraina ny andro.
Araka ny fitantaran’ireo olona teo amin’ny manodidina, tsy ampidirin’ny fianakaviany an-trano ity lehilahy ity rehefa mamo satria manakorontana sady mahery setra amin’ny olona ao an-tranony ka izao natory an-dalana izao, kanjo ny fatiny sisa no hitan’ny olona. Tsy miaraka rahateo ny hamamoana sy ny hatsiaka satria miafara amin’ny famoizana aina toy izao rehefa mitambatra.
Tsiahivina fa olona sahirankirana avokoa ny ankamaroan’ireo olona mararin’ny toaka nandalo fizahana ara-pahasalamana tao amin’ny sampana famelomana aina eo anivon’ny hopitaly HJRA nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena lasa teo. Ny tsy fahaizana mandanjalanja ny fisotroana sy/na toaka sotroina ny tena olana ka miafara amin’ny tsy fahatsiarovan-tena.
Lehilahy iray mpitari-posy koa matin’ny hatsiaka tao amin’ny fokontany Ampatana Antsirabe, ny alarobia teo. Roa lahy izy ireo no niara-natory teo ambany lavarangana trano fivarotana iray. Namoy ny ainy anefa ny iray tamin’izy roa lahy. Tsy manan-kavana ao Antsirabe izy roa lahy ka ny mponina tao Ampatana no nifanome tanana tamin’ny fanampiana sy fikarakarana ny razana.